EURO 2016: France oo kulankoodii furitaanka guul ku furtay kaddib guul soo daahday ay ka gaareen xulka Romania – Gool FM
EURO 2016: France oo kulankoodii furitaanka guul ku furtay kaddib guul soo daahday ay ka gaareen xulka Romania
(France) 10 Juunyo 2016. Marti galiyayaasha Euro 2016 ee Faransiiska ayaa guul soo daahday ka gaaray xulka Romania kulankoodii furitaanka kaddib 2-1 ay ku mareen xulka Romania
Xulka Fransiiska ayaa laga cabsiiyay bilowgiiba daqiiqadii 3-aad ee ciyaarta kaddib markii koorno la soo tuuray ay ka faa’iideysteen xulka Romania balse waxaa si dirqi ah ku bad-baadiyay goolhaye Lloris.
Cabsidaa kaddib xulka France ayaa yare degay oo caadi ciyaarta ku watay waxayna fursad heleen mar uu Payet u soo karoosay Giroud oo madaxa la helay balse goosha ayay dhinac bartay daqiiqadii 10-aad ee ciyaarta.
Birta ayay ku dhufteen xulka Fransiiska daqiiqadii 14-aad kubbad uu soo karoosay Sagna oo daafacyada ku dhacday una soo laabatay Antoine Griezmann oo madaxa inta la helay birta ku sii dhuftay.
Daqiiqadii 36-aad ee ciyaarta ayuu misane Griezmann sameeyay fursad kale kaddib markii uu lugta ku taabtay kubbad banaanka loo soo dhigay oo ku sii dhacday mid ka mid ah daafacyada Romania iyadoo birta meel hoose ka sii taabatay.
2-dii daqiiqo ee lagu daray qeybtii hore ee ciyaarta ayay markale fursad sameeyeen xulka France oo waxaa madaxa la helay kubbad dhanka koornada ka timid Giroud balse birta korkeeda ayay ka martay.
Markii la isku soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta xulka Fransiiska ayaa helay goolkoodii furitaanka kaddib markii uu Payet karoos uu soo qaaday dhaaftay gacmaha goolhayaha Romania waxaana madax sii jeed ah dhaliyay Olivier Giroud daqiiqadii 57-aad ee ciyaarta.
Laakiin xulka Romania ayaa goolka iska soo guday 8-daqiiqo kaddib, Evra ayaa rigoore ku keenay xulkiisa waxaana rigoorada ansixiyay isla laacibkii lagu galay ee Bogdan Stancu kaa oo ciyaarta ka dhigay 1-1.
Afar ka mid ah lixdii kulan ee ugu dambesay Euro rigoore ayaa laga dhalinayay kooxda marti galiyayaasha ah sida iminkaba ku dhacday xulka France oo koobkan marti galinaya.
Dhammaadkii ciyaarta daqiiqadii 89-aad ayaa waxaa goolka guusha xulka u dhaliyay Dimitri Payet oo markii ugu horreysay koobkan ciyaaraya waliba gool aad u qurux badan uu ka soo toogtay goosha 20-yard meel u jirta, ku darso tirada isagaa caawiyay goolkii hore.
Madaxwaynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo caro darteed uga soo tagay Duugtii allaha u naxariistee Feeryahan Mohammed Ali...(Maxaa laga bi’iyay?)
TOOS u daawo: Argentina vs Panama - LIVE